पाकिस्तानी जेलबाट पुकार : ‘म नेपाल फर्कन चाहन्छु’ |
पाकिस्तानी जेलबाट पुकार : ‘म नेपाल फर्कन चाहन्छु’
2 September, 2017 | Sandeep Bhattarai | 1620 Views | comments
‘बुवा, हाम्रो अंकल भेटिनुभो जस्तो छ,’ मोबाइलबाट आएको भतिज कर्णबहादुर चन्दको आबाजले बैतडी, हटैराज–२, गुर्केलीका रणबहादुर चन्द ( ५६) को आङ् सिरिङ भयो ।
उनी जुरुक्क उठे, के गर्ने मेसो पाएनन् । ‘कहाँ भेटिस् ? कसरी चिनिस् ?,’ सासै नफेरी रणबहादुरले प्रश्नको वर्षा गरे भतिजलाई । ‘यहाँ फेसबुकमा लेखेको छ,’ कर्णबहादुर भन्दै थिए, ‘फोटो म चिन्दिनँ तर विवरण हाम्रो अंकलसँग मिल्छ ।’
भाइ नरेन्द्रलाई स्वदेश फर्काउन अहिले रणबहादुर दिनहुँ कसै न कसैको घरमा पुगैकै हुन्छन् । दुई हात जोडी भाइ र उनको परिवारलाई नेपाल ल्याउन सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्दै याचना गर्छन् उनी सबैसँग । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर समस्याको पोको खोल्ने उनको धोको भने पूरा भएको छैन ।
‘बुबा तपाईंले हाम्रो अंकल हराउनुभएको भन्नुभएको होइन,’ छोरीले भनिन् । ‘हो, किन,’ रणबहादुरको मुटुको धड्कन बढ्यो । ‘उहाँ हाम्रो अंकल हो र ? यहाँ लेखेको सबै कुरा त हामीसँग मिल्छ,’ छोरीले फेसबुक खोलेर मोबाइल बुबाको हातमा थमाइन् । मोबाइल समातेका रणबहादुरका हात कापिरहेका थिए । फेसबुकमा राखिएको फोटो आफ्नै भाइको हो वा होइन उनले ठम्याउन सकेनन् । उनी एकोहोरो हेरिमात्र रहे । फोटो सानो थियो, राम्रोसँग नबुझिने । फोटोसँगै लेखिएको सन्देश भने उनले बुझे ।
‘हे भगवान, मेरो भाइ भेटियो,’ अनायसै रणबहादुरको मुख खुल्यो । उनका आँखा रसाए, आँसु खसे । नरेन्द्रबहादुर चन्दको फेसबुक सूचनामा लेखिएको थियो ‘मेरो नाम नरेन्द्रबहादुर चन्द हो । मेरो घर बैतडी, हटैराज–२ हो । मेरा दाइहरूको नाम रणबहादुर चन्द, धनबहादुर चन्द, गजबहादुर चन्द हो ।’ नरेन्द्रबहादुर हराएको २७ वर्ष भएको थियो ।
‘नरेन्द्रबहादुर चन्द पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा अलपत्र हुनुहुन्छ ।उहाँलाई कसैले चिन्नुहुन्छ भने यो सूचना उहाँका नेपालमा रहेका आफन्तसम्म पुर्याइदिनु होला,’ फेसबुक पेजमा अर्को सूचना पनि थियो ।
‘भाइ, फेसबुकमा नरेन्द्रबहादुर चन्दको पेज एकपल्ट खोलिदिनुपर्यो,’ उनले साइबरका भाइलाई आग्रह गरे । उनले तुरुन्तै फेसबुकमा नरेन्द्रबहादुर चन्दको नाम टाइप गरी खोजे । फेसबुकमा सर्च गर्दा थुप्रै नरेन्द्रबहादुर चन्द देखिए ।
‘भान्जा, तपाईं त हराउनुभएको थियो । यहाँ कसरी त ?,’ मामाले सोधे । पिथौरागढ हुँदै वनबासा आएको नरेन्द्रले सुनाए । त्यसपछि मामाले पसल साहुसँग आफ्नो भान्जा लैजाने कुरा राखे । पसल साहु पनि नरेन्द्रलाई पठाउन राजी भए । मामाले नरेन्द्रलाई चाँदनीस्थित आफ्नो घर ल्याए र दाइ रणबहादुरलाई खबर पठाए । छुट्टी मिलाएर रणबहादुर मामाघरतर्फ हुइँकिए ।
‘यी जुठा भाँडा माझेर कति बस्छौ । यहाँ तिम्रो केही हुन्न । मसँग हिँड, तिमीलाई राम्रो जागिर र पैसा दिन्छु,’ एक दिन अलदाले भने ।‘कहाँ ?’ नरेन्द्रले मुख खोले । ‘मेरो घरमा,’ उसले भन्यो । ‘हुन्छ,’ घर कहाँ छ भन्ने सौध्दै नसोधी नरेन्द्रले टाउको हल्लाएर सहमति जनाए ।
अलदाले दुई लाख रुपैयाँजतिको सामान किनेर नरेन्द्रको जिम्मा लगाए । सँगै रेल स्टेसनसम्म गए । ‘यो मेरो छोरो हो । यसलाई र यो सामानलाई बागाबोडर हुँदै लाहोरसम्म पुर्याइदिनु,’ अलदा रेलका कर्मचारीसँग भने । नरेन्द्रलाई रेल कर्मचारीको जिम्मा लगाएर अलदा भने मुम्बई गई जहाज चढेर पाकिस्तान पुगे । यो २०४६ सालको कुरा हो ।
अलदाले नरेन्द्रका लागि नयाँ रेष्टुरेन्ट खोलिदिए । न्यू कराँची सिर्जना कोलनी गल्ली नं. ६ मा थियो रेष्टुरेन्ट । नरेन्द्रको मन त्यहाँ खासै रमाएको थिएन । त्यहाँको भाषा उनले राम्रोसँग बुझ्न सकेका थिएनन् । उनलाई आपूm कुन ठाउँमा छु भन्ने हेक्कासमेत थिएन । भित्ताहरूमा लेखिएका अक्षर उनले बुझ्दैनथे । सबैजना स्लाम समुदायका मानिस मात्र थिए । आफू परिबन्दमा परेको उनले विस्तारै बुझ्दै गए । उनलाई अब एउटै चिन्ता हुन थाल्यो– फुत्केर घर कसरी जाने ।
‘यो कुन ठाउँ हो ?,’ नरेन्द्रले सोधे । ‘यो पाकिस्तानको कराँची । अब तिमी यहीं बस्छौं,’ अलदाको जबाफले नरेन्द्र झसंग भए । ‘म यहाँ बस्दिनँ । मलाई घर फर्काइदिनु,’ नरेन्द्रले दुई हात जोडे । ‘किन जानुपर्यो , यहीं बस्दा भैगो नि,’ अलदाले सम्झाउन खोजे । ‘आमाको याद आयो,’ नरेन्द्रका आँखाबाट आँसु खसे । ‘यो पनि तिम्रो आमानै त हो नि । यी तिम्रा भाइबहिनी हुन् । म तिमीलाई यहींको नागरिकता बनाइदिन्छु,’ अलदाले श्रीमती र छोराछोरीतर्फ देखाउँदै भने ।
नरेन्द्र रोइमात्र रहे । उनलाई कराँचीमा दुःख थिएन ।
तर उनले आफू मिल्दो वातारवरण त्यहाँ भेटेनन् । कहिलेकाहीं अलदाले उनलाई इस्लाम धर्म अंगाल्न आग्रह गर्थे । तर नरेन्द्रले यसतर्फ ध्यान दिएनन् । सारै न्यास्रो लागेपछि तीनपटक उनले बैतडी घरमा चिठी पठाए । तर घरमा एउटामात्र चिठी पुग्यो । बाँकी दुई चिठी अझै बैतडी पुगेका छैनन् । नरेन्द्रले चिठी जुन भाषामा लेखेका थिए त्यो बुझ्ने घरमा कोही भएन । चिठी उर्दु, पास्तु के भाषामा थियो त्यो बैतडीमा रहेका परिवारलाई अहिलेसम्म थाहा छैनन् । तर चिठीमा भएका दुई कुरा भने दाइ रणबहादुरले बुझे– भाइ बसेको ठेगाना र उसको फोन नम्बर ।
‘गरौंला नि बिस्तारै, किन हतारिनु पर्यो,’ नरेन्द्र यसरी नै टार्थे ।
तीन वर्ष यसरी नै फोनमा कुराकानी गरेर बित्यो नरेन्द्रको । उनका दुई दाइ नेपाली सेनामा थिए । अरुले नखोजे पनि ती दुई दाइले आपूmलाई खोज्ने आशा नरेन्द्रमा थियो । दाइहरू सम्पर्कमा नआएपछि उनीभित्रको नेपाल फर्कने आशा मर्दै थियो । धर्म परिवर्तन र विवाहका लागि उनमा दबाब बढ्दै गयो । उनले थेग्न सकेनन् । अन्ततः नरेन्द्रले आत्मसर्मपण गरे । इस्लाम कबुल गरे । उनी नरेन्द्रबहादुर चन्दबाट महम्मद अयुब खान बने । उनलाई सबैले ‘नरेन्द्र’ होइन ‘महम्मद’ भनेर बोलाउन थाले । २०५५ सालमा उनले अफगानी शरणार्थीकी छोरीसँग निकाह (विवाह) गरे ।
‘यो त विदेशी केटो हो, हाम्रो दाजुभाइ होइन,’ अलदाको परिवारभित्रै नरेन्द्रको विषयमा कुरा उठ्यो । एक दिन त अलदाका छोराछोरीले नरेन्द्रको कठालो समाते । ‘त को होस् ? कहाँबाट आएको ? हाम्रो सम्पत्तिमा आँखा किन लाइस् ?,’ अलदाका छोराछोरीले भन्न थाले । अलदाकी कान्छी श्रीमती नरेन्द्रको पक्षमा थिइन् । ‘तेरा बाउले धर्मपुत्र बनाएर ल्याएको यो बाबुलाई,’ अलदाको कान्छी श्रीमतीले छोराछोरीलाई सम्झाउन खोजिन् । तर उनीहरूले मानेनन् ।
‘लौ भाइ, तिम्रो असली नाम र नेपालको ठेगाना भन । तिम्रो फेसबुक आइडी बनाइदिन्छु । कोही न कोही तिम्रो देशको मान्छे कसो सम्पर्कमा नआउला त,’ बिक्कीले भने । नरेन्द्रले सम्झना भएसम्म विवरण उनलाई टिपाए । ‘तर, मलाई त फेसबुक चलाउन आउँदैन दाइ,’ नरेन्द्रले भने । ‘चिन्ता नगर, तिम्रो फेसबुक म चलाईदिउँला,’ बिक्कीले भरोसा दिलाए । बिक्कीले नरेन्द्रको फेसबुक आइडी बनाए र उनको पेजमा एउटा सन्देश राखिदिए ‘मेरो नाम नरेन्द्रबहादुर चन्द हो । मेरो घर बैतडी, हटैराज–२ हो । मेरा दाइहरूको नाम रणबहादुर चन्द, धनबहादुर चन्द, गजबहादुर चन्द हो ।’ त्यहीं बिक्कीले अर्को सूचना पनि राखिदिए, ‘नरेन्द्रबहादुर चन्द पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा अलपत्र छन्, उहाँलाई कसैले चिन्नुहुन्छ भने यो सूचना उहाँको नेपालमा रहेका आफन्तसम्म पुर्याइदिनु होला ।’
मोहनले नरेन्द्रको फेसबुक पेजबाट मोबाइल नम्बर प्राप्त गरेका थिए । ‘मेरा लागि तपाईं भगवान भएर आउनुभो,’ रणबहादुर भावह्विल भए ।‘तपाईंका भाइलाई नेपाल फर्काउन हामी सक्दो सहयोग गर्छौं,’ मोहनले भने ।‘भाइ नरेन्द्रको नम्बर पठाइदिनु होला,’ रणबहादुरले भने ।
२०७३ कात्तिक ११ गते बिहान ८ः४५ बजे रणबहादुरले पाकिस्तानमा भाइलाई फोन लगाए । ‘अस्सलामु अलैकुम’ उताबाट आबाज आयो । उनी अक्क न बक्क भए । ‘तपाईं को बोल्नु भएको,’ रणबहादुरले भने । उताबाट केही जबाफ आएन । ‘कौन हे,’ केहीबेरको मौनता तोड्दै उताबाट उर्दु लबजमा सोधियो । रणबहादुरलाई यो बुझ्न बेर लागेन कि उता जो व्यक्ति बोलिरहेको छ उसले नेपाली बुझिरहेको छैन । त्यसपछि रणबहादुरले पनि जानी नजानी हिन्दीमा जबाफ फर्काए । उनको हिन्दी ‘विरबलको खिचडी’ जस्तो थियो ।
‘म बैतडीको मान्छे हुँ । बैतडी भन्ने सुनेको छौं,’ रणबहादुरले टुटफुट हिन्दीमा यसरी सोधेका थिए । ‘सुनेको छु,’ नरेन्द्रले सासै नफेरी सोधे, ‘तपाईंको घर बैतडी कहाँ हो ?’ ‘मेलौनी थाहा छ,’ रणबहादुरले भाइको परीक्षा लिँदै थिए ।
‘छ,’ नरेन्द्रले भने । ‘मेरो घर पनि बैतडी हो,’ नरेन्द्रले भने, ‘हटैराज–२, गुर्केली ।’ ‘तिम्रो घरमा को को छन् ?,’ रणबहादुर अझैं भाइको परीक्षा लिइरहेका थिए ।‘पाँच दाइ हुनुहुन्छ,’ प्रत्येक प्रश्नको सही जबाफ नरेन्द्रले दिँदै गए । उनले पाँच दाइको नाम सुनाए । अनि भने, ‘मेरो नाम नरेन्द्रबहादुर चन्द हो ।’ रणबहादुरले भाइसँग बैतडीका छिमेकीबारे पनि सोधे । उनले सबै बताए । त्यति नै बेला उनको मोबाइलको ब्यालेन्स सकियो, २७ वर्षपछिको दाजु–भाइबीचको संवाद रोकियो ।
‘म यहाँ अलपत्र परेको छु । मर्ने र बाँच्ने ठेगान छैन । म नेपाल फर्कन चाहन्छु,’ नरेन्द्रले घर परिवारलाई सन्देश छोडे । भाइको सन्देश सुनेपछि रणबहादुरले आफूलाई थाम्न सकेनन् । ‘म दाइ रणबहादुर हुँ, चिनिनस् मलाई,’ रणबहादुरको गला बस्यो । केही समय दाजुभाइ दुवैको बोली फुटेन । ‘बुबा त म दिल्ली छँदै बित्नुभएको थियो, आमा कस्ती हुनुहुन्छ ?,’ नरेन्द्रले मौनता तोडे । ‘सञ्चै हुनुहुन्छ । तँ कतै भेटिन्छस्कि भनेर लौरीको सहारामा यतायता गर्नुहुन्छ । अब तँ भेटिइस् । त बाँचेको थाहा पाएर अब लौरो छोड्नुहोलाकि,’ रणबहादुरले भाइसँग ढाँटे । खासमा आमाको मृत्यु भइसकेको थियो । २७ वर्षपछि फोनमा भेटिएका भाइलाई नराम्रो खबर सुनाउन मन नलागेर मात्र उनले ढाँटेका थिए । भाइले आफूले भोगेको सबै दुःख दाइलाई सुनाए । उनले अफगानी शरणार्थी महिलासँग विवाह गरी एक छोरा र एक छोरी जन्मेको पनि सुनाए । ‘दाइ, मलाई जसरी नि नेपाल फर्काउनोस्, म यहाँ बस्न सक्दिनँ,’ नरेन्द्रले भने ।
‘तँलाई त म ल्याउन सकुँला, तर तेरा श्रीमती र छोराछोरी ल्याउन सकिनँ भने के गर्ने ?,’ रणबहादुरले भने । ‘म एक्लै त फर्किन्नँ । बरु दुःख पाएर यहीं मर्छु,’ भाइले सुनाए ।
दूतावासका कर्मचारीले फोन गर्दा कुनै झुठो नबोल्न रणबहादुरले भाइलाई सिकाएका थिए । उनले भाइलाई सम्झाएका थिए, ‘झूठो नबोल्नु । झूठो बोले आफैंले दुःख पाइन्छ । त्यहाँ जे भएको छ त्यहीमात्र बताउनू ।’ ‘झूठो बोले, मैं मरुँला,’ भाइले पनि बाचा गरे ।
२०७३ मंसिर ११ गते रणबहादुरले पाकिस्तानमा रहेका भाइलाई फोन लगाए । उताबाट आएको आबाज सुन्दा उनको मनमा चिसो पस्यो । किनकी त्यो आबाज भाइको थिएन । अघिल्ला दुईदिन भाइको नम्बरमा फोन गर्दा लागेको थिएन । तीन दिनपछि फोन त लाग्यो तर उठाउने भाइ थिएन अरु कोही बोलिरहेको थियो । ‘तपाईं को बोल्नु भएको ?,’ आश्चर्य मिश्रित स्वरमा रणबहादुरले सोधे । ‘म नरेन्द्रको सालो हुँ,’ आफ्नो नाम अब्दुल अली बताउने व्यक्तिले भन्यो । ‘फोन भिनाजुलाई दिनु न,’ रणबहादुरले भने ।
‘कहाँ जानुभएको छ,’ रणबहादुरले सोधे । ‘भिनाजुलाई बोस (प्रहरी) आएर लगे,’ अब्दुलले भने । ‘कहिले ?,’ रणबहादुरले सोधे । ‘तीन दिनअघि (२०७३ मंसिर ८ गते),’ अब्दुलले जबाफ दिए । ‘कहाँ लगे’ रणबहादुरले फेरि सोधे । ‘थाहा छैन,’ अब्दुलले भने ।
रणबहादुर प्रत्येक दिन अब्दुललाई फोन गर्थे । जबाफले सधै उनलाई निराश बनाउँथ्यो । केही दिनपछि अब्दुलले फोन उठाउन छोडे । उनी झन् निराश बने । त्यसपछि २०७३ माघ १७ गतेमात्र अब्दुलले फोन उठाए । ‘(नरेन्द्रको) केही पत्ता लाग्यो,’ रणबहादुरले सोधे । ‘छैन, हामी खोजिरहेका छौं,’ अब्दुलको जबाफ पुरानै थियो । ‘नरेन्द्रका बालबच्चा, श्रीमतीलाई कस्तो छ,’ रणबहादुरले रगतको नाता सम्झिए । ‘ठीकै छ, हामीले खान दिएका छौं,’ फोन काटियो ।
रणबहादुर हरेक क्षण मोबाइलमा आँखा डुलाउँथे । कसैले फोन गरेर ‘तपाईंको भाइ पत्ता लाग्यो’ भनिहाल्छ कि भन्ने आशा उनमा थियो । २०७४ असार १० गते दिउँसो २ः४५ बजे उनको मोबाइलमा पाकिस्तानी नम्बर देखापर्यो । जुन पाकिस्तानस्थित नेपाली दूतावासका कर्मचारीले गरेका थिए । ‘तपाईंका भाइ भेटिनुभयो,’ ती कर्मचारीले भने । ‘कहाँ रहेछ,’ खुसीले हौसिँदै रणबहादुरले सोधे । ‘क्वेटा कारागारमा’, दूतावासका कर्मचारीले जबाफ फर्काए, ‘भाइको अवस्था राम्रो छ । नेपाल जानेजस्तो कुरा गर्नु भएन, तपाईं एकपटक यहाँ आउने हो कि ?’
भाइको अवस्था पत्ता लागेपछि असार १९ गते रणबहादुर नयाँदिल्लीबाट नेपाल फर्के । उनले आफ्नो क्षेत्रका नेता रमेश लेखकलाई भेटेर भाइको समस्या सुनाए । उनले भाइको सपरिवारलाई नेपाल फर्काउन पहल गरिदिन आग्रह गरे । लेखकले परराष्ट्रमन्त्री र सचिवसम्म कुरा पूर्याएको उनको विश्वास छ । नेपाल फर्केपछि उनले भाइसँग पनि मोबाइलमा कुराकानी गरे । ‘भाइ उता रोइरहेको छ, म यता,’ रणबहादुरले भने ।
भाइ नरेन्द्रलाई स्वदेश फर्काउन अहिले रणबहादुर दिनहुँ कसै न कसैको घरमा पुगैकै हुन्छन् । दुई हात जोडी भाइ र उनको परिवारलाई नेपाल ल्याउन सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्दै याचना गर्छन् उनी सबैसँग । सहयोगको आश्वासन उनले सबैबाट पाएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर समस्याको पोको खोल्ने उनको धोको भने पूरा भएको छैन । प्रधानमन्त्री देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाको मोबाइलमा पटकपटक फोन गर्दा पनि नउठाउँदा प्रधानमन्त्रीसम्म समस्याको पोको पुर्याउने उनको धोको पूरा हुनसकेको छैन ।
आजको नागरिकबाट ।
#पाकिस्तानी जेलबाट पुकार
#म नेपाल फर्कन चाहन्छु’